Global Voices teny Malagasy · 7 Febroary 2015
07 Febroary 2015
Tantara tamin'ny 07 Febroary 2015
Aterineto Sy Vetaveta. Fanehoana Hevitra, Fikatrohana, Fitsipika
Mediam-bahoaka07 Febroary 2015
Ao anatin'ity resaka ity ireo vehivavy mavitrika, mpandray fitenenana, dia niditra lalina tamin'ny mety ho endriky ny fandalàna ny maha-vehivavy ety anaty aterineto.
Tondra-dranon'ny Tapa-Taonjato — Nefa Mety Mbola Tsy Henonao Mihitsy
Afrika Mainty07 Febroary 2015
Efa namindra olona manakaiky 200.000 ao Malawi ny tondra-drano, namotika ny vokatra ary nitondra ahiahy amin'ny mety isian'ny aretina. Ao amin'ny faritra mora tratran'ny tondra-drano, mbola mety ho ratsy kokoa ny hoavy.
Manontany Ny Filipiana Hoe ‘Aiza Ny Filoha?’ Rehefa Tsy Tonga Nanome Voninahitra ireo Polisy Maty An'Ady
Azia Atsinanana07 Febroary 2015
Polisy efatra amby efapolo no namoy ny ainy nandritra ny bemidina manokana fanenjehana ireo voalaza fa atidoha nikotrika ny fanapoahana baomba tao Bali tamin'ny taona 2002. Tsy nanatrika ny fahatovangan'ny vatana mangatsiakan'izy ireo ny filoha Aquino fa nanatrika hetsika momba ny fiara.
37 Voafantina Hiady ny Famaranana Amin'ny SIMA 2015
Tafiditra ao amin'ny Tahirin'ny SIMA sy ny andiam-pandaharana Fitsangatsanganana, sehatra iray miasa ho amin'ny fampisehoana lahatsarim-panadihadiana manerantany ireo [sarimihetsika] miady ny famaranana.
Fancy Galada Avy Ao Capetown, Mihira Ho Fahasitranan'ny Tenany Sy Ny Hafa
Tsy maintsy nitombana ho lehibe haingana i Fancy Galada dieny tany amin'ny faha-10 taonany, nikarakara ireo anadahy sy rahavaviny. Ary indraindray, dia nisedra fijaliana ny fahazazàny. Mihira izy mba ho sitrana amin'ireny fahatsiarovana mangidy ireny.
Mpanao Hatsikana ao Espaina Miatrika Fiampiangana Ho “Manandratra” Fampihorohoroana
Eoropa Andrefana07 Febroary 2015
Ny ampitson'ny fanafihana ny gazetiboky mpanesoeso Charlie Hebdo tao Frantsa, nampiantso ilay mpanesoeso Facu Díaz ny fitsarana Espaniola mba hanadihady azy momba ny tantara mananihany navoakany tamin'ny fampisehoana tamin'ny fahitalavitra antseraserany.